सुँगुरको मुटु ५७ वर्षीय पुरुषमा प्रत्यारोपण ! « Drishti News – Nepalese News Portal
सुँगुरको मुटु ५७ वर्षीय पुरुषमा प्रत्यारोपण !
२७ पुस २०७८, मंगलबार 10:36 am
काठमाडौं । अमेरिकाका एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ । बीबीसीका अनुसार सुँगुरको मुटु मानिसमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको यो विश्वमै पहिलो हो ।
‘यो प्रत्यारोपण बेनेटको जीवन बचाउने अन्तिम उपाय थियो । यद्यपि अब उनी कति लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् भन्ने कुरा भने स्पष्ट भइसकेको छैन,’ बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
अपरेशन गर्नुअघि बेनेटले भनेका थिए- ‘यो प्रत्यारोपण ‘बाँच या मर’ भनेजस्तै थियो । उनले भनेका छन्, ‘मलाई थाहा छ यो अँध्यारोमा तीर हानेजस्तै हो तर यो अन्तिम मौका थियो ।’
अमेरिकामा हरेक दिन १७ जना मानिसको प्रत्यारोपणका लागि पर्खिंदापर्खिंदै ज्यान जाने गरेको छ । एक लाखभन्दा बढी मानिसहरु प्रत्यारोपणको पालो कुरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनावरको अंग मानिसमा प्रत्यारोपण (जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन) को सम्भावनाबारे धेरै अगाडिदेखि नै अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।